U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.6 emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.6.1 | IPhone iindaba
U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.6 emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.6.1
Nge-12 ka-Agasti, iApple yakhupha i-iOS 13.6.1 ethi ithiyori inokuba yiyo uhlaziyo lwamva nje lwenguqulelo yeshumi elinesithathu ye-iOSNgaphandle kokuba akukho bugs zifunyenweyo kolu hlaziyo lutsha, ngokungathi yenzekile nge-iOS 13.6, uhlaziyo lubangele iingxaki ezahlukeneyo ezazalungiswa kwi-iOS 13.6.1.
IOS 13.6 isizisele Inkxaso yeeCar Keys kunye neApple News ukusebenza kweaudiyo, ukongeza kweminye imisebenzi enganiki mdla kangako. Kwiveki enye emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.6.1, iiseva zeCupertino ziyekile ukusayina i-iOS 13.6, ke akunakwenzeka ukuba uthothule umthwalo xa kukho imfuneko.
U-Apple uyeke ukusayina iinguqulelo ezidlulileyo kwiveki emva kokukhupha ingxelo entsha, nangona ngamanye amaxesha, ishiya umda weeveki ezi-2 ngesizathu esingasaziyo. Isizathu sokususa uhlaziyo lwangaphambili kukuba umsebenzisi uhlala ehlaziywa kuhlobo lwamva nje olukhoyo, Inguqulelo ekhusela ubuthathaka obunokufunyanwa kwiinguqulelo ezidlulileyo.
IOS 13.6.1 ilungisa imiba eliqela kubandakanya Umbala oluhlaza wesikrini ngenxa yengxaki yokusasaza ubushushu (Njengoko kuchaziwe yiApple kumanqaku ohlaziyo). Ukulungisa ingxaki eboniswe zezinye izixhobo ezingacimanga ngokuzenzekelayo iifayile ezingafunekiyo kwinkqubo xa ukugcinwa kuphantsi. Enye ibug eyayilungiswe kolu hlaziyo yile ikhubaza izaziso zokuvezwa ngokuzenzekelayo.
Umphuhlisi we-beta wamva nje okhoyo namhlanje yinombolo 5, i-beta ekufuneka ilungise ifayile ye Ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu eboniswe yi-beta yesine. Izinto ezintsha ezinokufakwa kwi-beta yesihlanu ye-iOS 14 ekugxilwe kuyo, kwakhona, kwizaziso zokuvezwa, isikrini esamkelekileyo sesicelo seendlela ezimfutshane, iwijethi yeApple News ... Oku kubhaliwe Unazo zonke iindaba ze-beta yesihlanu ye-iOS 14.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.6 emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.6.1
U-Sofia Coppola kunye ne-trailer yokuqala ka-Bill Murray ye-On the Rocks movie ngoku iyafumaneka
Ukuba nexabiso le-2 trillion yeedola ayisiyiyo into enokuthethwa ngumntu wonke